KAJIRINTA UKUMAHA: XULASHADA HEN, XAALADAHA MASKAXDA - QABOOJINTA DABIICIGA AH
Digaagga koraya iyo taranta ma aha oo kaliya hawl fudud, laakiin sidoo kale faa'iido leh.
Waxaa intaa dheer, isagoo mar kaliya ku iibsaday digaagga suuqa, mar dambe uma baahnid inaad lacag ku qaadato si aad u hesho jiil cusub oo digaag ah.
Ka dib oo dhan, run ahaantii, sababta ay dhibaato dheeraad ah, haddii badi digaagga ayaa si fiican u horumariyey dareenka iyo haynta caruurtooda.
Qodobka hoose wuxuu si buuxda u dhajin doonaa sifooyinka dabiiciga ah ee ukunta ama, si kale haddii loo dhigo, xayeysiinta.
Waxaan si faahfaahsan uga hadli doonaa sida, goorta iyo qiyaasta qadarka ukumaha ku jira ee hen ka dib si loo helo shimbiraha quruxda badan.
Sida loo aqoonsado shimbir oo diyaar u ah inay ukunteeda ukunta: calaamadaha ugu muhiimsan ee hen
Isticmaalka hen ah si aad ukuntid ugxanta ayaa leh faa'iidooyin badan oo ah kulubka caadiga ah.
Dabcan, iyadoo gacan ka helaysa qalabkan waxaad awoodi doontaa inaad hesho tiro badan oo ah dhalinyaro ah muddo gaaban, laakiin markaa hal su'aal ayaa noqota mid cad: sida loo ilaaliyo iyo sida loo ilaaliyo?
Qofka, ilaalinta digaagga yar yar ama poults turkey waa ganacsi aad u dhib badan, halka hen waxay la tacaali doonaan arrintan si fudud iyo farxad.
Waxaa ka mid ah noocyada digaagga, berriga, turkiga, iyo noocyo kale oo digaag ah oo ku badan beeraha gudaha, dareenka loogu talagalay qashinka ukumaha ayaa muujinaya dumarka intooda badan.
Dhibaatada leh digaaggu wuxuu dhacaa marka shimbiraha lagu hayo beeraley badan iyo beeraha digaaga, halkaasoo ay ku yareeyaan aagga si ay u socdaan.
Si aad u fahamto in shimbir diyaar u tahay in uu daboolo, waxaad si toos ah u sameyn kartaa dhaqankeeda:
Hooyo oo leh dareen duufaan ah ayaa bilaabeysa si aan caadi aheyn.
Waxay ku jiri kartaa waqti aad u dheer buulkeedii, taas oo laga yaabo inay xitaa tahay in la kaxeeyo si loo soo qaado ukunta.
Dibedda, waxay noqon kartaa wax yar oo is-xajin, maadaama ay bilaabmeyso inay boogaha ka soo baxdo lafteeda si ay u noqoto buul.
Cabbirka shanlooyinka iyo hilibka ayaa la yareeyey.
Ukunta-yare ee digaagga mustaqbalka mustaqbalka joojiyaa si buuxda.
Ka dib markaad aragtay nooc ka mid ah kuruka ka mid ah xayawaankaaga, waa inaadan degdegin oo isla markiiba ku beeraan tirada ugu badan ee ukunta. Ka dib, u baahan tahay shimbir dabeecad xasilansidaas darteed nuskii waqtiga kala-guurka ah ma uusan ka tegin buulka. Sidaa daraadeed, waxaa habboon in la hubiyo sida ay ujeeddadeedu tahay: muddo 2-3 maalmood ah waxay dhigeen ukunta dummi ee digaaga.
Haddii, 2 maalmood ka dib, way ka tagtay buulkeedii oo ay joojisay joojinta, ma jiri doonto hen mid ka baxsan. Haddii aad sii joogtay meeshii hore oo aanad xitaa korin - waxaad si ammaan ah u gelin kartaa ukumaha kuleylaha ee hoos yimaada.
Maxaa dhacaya haddii digaagga oo dhan, qofna uusan muujin rabitaanka inuu ukumo ukunta?
Tani, dhab ahaantii, sidoo kale waxay dhacdaa inta badan. Laakiin waa inaadan murugoonin. Waxa kale oo suurtogal ah in lagu hormariyo dareenka dhalinta. Si tan loo sameeyo, dooro lakabka ugu wanaagsan (ka dib oo dhan, inta lagu guda jiro mudada dhalashada shimbirtu waxay lumisaa hal lixaad ee miisaankeedii hore) iyo sida ugu macquulsan moodada.
Waa in la qabtaa oo, xaqiiqda, si adag u fadhiisanaysa ukunta bogus, oo daboolka sare ee daboolaya. Haddii ayan duulin buulka, marka dhowr maalmood ka dib aad qaadatid dambarka, ka dibna waxaad ku dhigi kartaa ukumaha dhabta ah ee hoos yimaada.
Laakiin ha iloobin qodobbada soo socda:
Si aad u kululaato qaadashada shimbiraha caafimaadka qaba. Xitaa haddii caarada ama dulsaarada kale laga helo jidhka digaaga, waa in loola dhaqmaa si kasta, adoo siinaya qubeyska dahabka ah iyo daaweynta diyaargarow gaar ah.
Ka hor inta aanad lahayn, waa inaad isku deydaa inaad digaag ku quudiso sida ugu wanaagsan ee aad awooddo.
Waxaa fiican inaad ku shubto shimbir ukun ah oo qorraxda ah habeenkii, ama xitaa habeenkii, si aysan u keenin walaac.
Haddii aad leedahay chicks aad u badan, ka dibna si loo xakameeyo dareenka noocan oo kale ah shimbir, waxaad u baahan tahay inaad ku qoydo biyaha iyo ku xir qolka qabow iyo madow. Ku sii daayo laba jeer maalintii oo keliya quudinta. Ka dib markii lagu celiyo nidaamkan dhowr jeer oo isku xiga, digaaggu badanaa wuxuu joojiyaa oohinta.
Waxaa kale oo xiiso leh in aad barato sida guri loo dhiso gacmo gaar ah.
Astaamaha iyo shuruudaha ukun dhalidda
Waa wax aan suurtagal ahayn in la dhigo ukumaha la heli karo ee digaagta ah, maadaama laga yaabo inaysan dhammaantood la bacrin. Sidoo kale ma isticmaali karaan ukumaha lagu keydiyay qaboojiyaha, ama lagu wareejiyo dhibco heerkul kale.
Guud ahaan, fiiro gaar ah u yeel:
In idaha ee digaagga waxaa jiray saamiga saxda ah ee roosters iyo dheddigga. Tusaale ahaan, midhaha ukunta-hilibka, mid ka mid ah cunaha ayaa ku filan adhiga digaagga 10-12 qof.
Ukunta ayaa laga soo qaatay digaag caafimaad leh, taas oo horay u soo gashay qaansiirta (shimbirahan, waqtigaan wuxuu bilaabmayaa 7 bilood).
Wixii cuseyb ah, ukumo aad u cusbo ah ayaa la isticmaalay, kaas oo la burburiyay digaagga ugu dambeyn 6 maalmood ka hor.
Ukumaha ka hor inta aan la kulmin waxaa lagu keydiyay heerkul ah 15-20ºC, qoyaan ah 75%.
Looma isticmaalin ukumo sumaysan oo jaban.
Ukumaha dhexdhexaadka ah ayaa la dhigay meel digaag ah, maaddaama uur-ku-yaryannada badanaaba laga helaa kuwa yaryar, iyo xabbado waaweyn oo waaweyn.
Ukumaha ayaa lagu baari jiray iyada oo loo maro baakidhka loogu talagalay joogitaanka noocyo kala duwan.
Cayayaanka beerta ee hen
Beerka waa in la diyaariyaa horay. Cabbir ahaan waa inay noqotaa sida ukumaha iyo digaaga si fiican u haboon iyo in ukumaha aysan ka soo bixin.
Dhab ahaan - 55 ilaa 35 sentimitir.
Qaababka buulkuna waa inuu ahaadaa baaqul-qaabeeya, oo leh cawska salka iyo cawska oo dusha sare ku shubay.
Waxaa habboon in la sameeyo xayawaankaas xaaladdan oo kale si ay si xor ah uga tagto buulka bukaanka marka ay rabto inay wax cunto ama cabto.
Buuryo waxaa loo isticmaali karaa dhowr sanadood oo isku xigta, mar walba ku qalaji ka hor inta aan la kaydin.
Waa maxay meesha ugu fiican ee lagu beero shimbiraha ukunta?
Meesha loogu talagalay buulka digaaga waa in uu ku yaal meel aad u xasiloon, oo doorbidan, meel ka fog booska kale ee qofka. Digaagga waa in si xor ah loo dhigaa, dareemo degenaansho iyo ammaan.
Ammaanka waa in la siiyaa muhiimad gaar ah haddii jiirku badanaa galo gurigaaga. Xaaladdaas qashinka dabiiciga ah waxaa badanaa la joojiyaa, ama aan si toos ah loogu rakibin dabaqa, laakiin ku xiran khadadka gaarka ah.
Haddii ay jiraan chicks badan, ka dibna waxaa fiican in aan ku beeran qol isku mid ah. Goobta noocan oo kale ah waxay sababi kartaa dagaal aad u culus oo leh hareeraha iyo ukunta. Sidaa darteed, samee masaafada u dhaxaysa iyaga ugu badnaan, waa suurad wacan in xitaa digaaggu aanay maqlin midba midka kale.
Waxaad ugu yaraan ku dabooli kartaa sanduuq khafiif ah, sidaas awgeed cidhiidhiga qashinka digaagga.
Waxaan ka hadli karnaa sifooyinka tayada ugu fiican: adoo shuruudaha lagu kala dooranayo?
Xirfadlayaasha ugu fiican ee digaaga waxaa ka mid ah digaagga kuwaas oo ah wakiilo ka kooban hilibka iyo ukunta. Sidoo kale aad u fiican Dhiirrigelinta dareenku waxay muujinaysaa digaagga loo yaqaan purebredkuwaas oo inta badan lagu hayo tuulooyinka.
Sonkorta ugu dambaysa badiyaa waxay leedahay miisaan ku habboon soo saarid la'aan, iyada oo aaney aad u badaneyn inta lagu jiro muddadan. Sidoo kale, waxay sameeyaan "hooyooyin" oo aan caadi aheyn oo si fiican u daryeeli kara carruurtooda.
Qaar badan ayaa sidoo kale kugula talin kara dooranaya chicks sida ay uheshay hiddesidooda, taas oo ah, iyaga oo dooranaya sida ay astaamaha hooyada. Haddii ay digaag ahaan "mommy" digaagsan yihiin, ka dibna dhasheeda waxaa jiri doona digaagaha ugu caansan.
Waxaa la ogaaday in digaagdarrada noocan oo kale ah ay awoodaan in ay ukeenayaan ukunta ee nooc kasta. Sidoo kale digaagga ayaa sidoo kale inta badan isticmaalaan turkiga. Faa'iidadooda waxay tahay in ay awoodaan inay ku fariistaan ​​ukun kasta, marka lagu daro tiro badan oo ka badan digaaga laftiisa.
Si kastaba ha ahaatee, marnaba ma aha in la qaato digaagaha lagu xareeyay naqshad. Xitaa haddii 30 ka mid ah digaagada ugu yaraan hal bilaabo bilaabmaa guga, taasi waxay noqon doontaa kiis aad u yar.
Khudaarta ku jirta nooca ukumaha ayaa sidoo kale xun ku leh xakamaynta. Gaar ahaan, waxaa wanaagsan in lakabiyo ukunta Legorn ama digaagga daaqsinka ah ee hoostiisa hoostiisa hoostiisa.
Goorma ayay tahay waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo ukumaha ukunta?
Dareenka dhalinta waxaa badanaa lagu muujiyaa dhammaan shimbiraha cimilada cimilada xilliga guga. Tani waa arrin macquul ah, tan iyo korniinka dhalinyarada ah ee u muuqda xilliga gu'ga waxay leeyihiin waqti si ay u koraan inta lagu jiro mudada diiran ee sanadka iyo koraan xoogaa by dayrta iyo jiilaalka.
Gaar ahaan, muddo gaaban, waxay hoos u dhacaan waxaa lagu beddelayaa boodh joogta ah, taas oo ilaalin doonta shimbirta qabowga qaboobaha.
Laakiin xilliga guga waxaad u baahan tahay inaad ku qiyaasto wakhti fiican, sababtoo ah waxaad digaag u abuuri kartaa goor hore. Xaaladdan oo kale, waxaa jiri doona khatar weyn oo dhimasho ah oo aan la helin saamiyo dhallinyaro ah, tan iyo xilliga gu'ga waxaa sidoo kale jiri doona badi qabow.
Hagid u ah digaag ayaa ku fadhiistay ukunta qeybtii hore ee bishii Abriil, ka dibna digaagga soo muuqan doonaa bilowga ah ee diiran May. Inkastoo, qeexitaannada wakhtigani ay yihiin kuwo guud, markaa waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto xaaladda cimilada ee degaankaaga.
Muddada ukunta ukunta ee noocyada kala duwan ee digaagga
Xilliga digaagga ee ukunta waa ugu gaaban, marka la barbardhigo noocyada kale ee digaaga. Sidaa darteed, digaagga, muddadani inta badan waxay socotaa wax ka badan 20-21 maalmood. Laakiin ducks iyo turkiga dhallinyaradu waxay u muuqdaan 27-28 cisho marka laga soo bilaabo marka shimbirta ugu horeysa ee buulkeedii la socoto ukunta.
Geese waa kuwa ugu dheer buulkoodu - laga bilaabo 28 ilaa 30 maalmood. Isla mar ahaantaana, xitaa hal maalin ka hor dhammaadka taariikhda la cayimay ee maskaxda, ukumaha ayaa bilaabay inuu jeexo. Waqtigaan, ukunku waa digaag buuxa, kaas oo kudhaca gudaha gudaha qolka, isku dayaya in uu baxo.
Waa mid aad muhiim u ah in aanad soo dhexgalin nidaamkaan iyada oo aan loo baahnayn. Xaqiiqdu waxay tahay in xilligaan xilligaas hen ay noqdaan kuwo si gaar ah u jahwareersan, sidaa daraadeed, way ka fiicantahay inaanan mar kale dhibin. Haddii ugu dambeyntii ay jiri doonto 1-2 ukumood oo ay digaagadu aysan ku maareynin inay baxaan, ka dibna waad caawin kartaa.
Imisa sebtuun ayaan ku dhejin karaa hal haad iyo goorma ayey tiradani ku xiran tahay?
Tiradani waxay si toos ah ugu tiirsan tahay cabbirka xajmiga laftiisa. Haddii digaaggu aad u ballaadhan yahay, markaa waxay awoodi doontaa inay daboolaan ukumo badan oo badan oo jidhkooda ka mid ah. Celcelis ahaan, 13 ilaa 15 ukumo ayaa la dhigaa halkii hen. Markay qashin ukumo waaweyn oo ah noocyada kale ee digaaga, lambarkooda waa in la dhimo. Tixgeli waxyaabaha soo socda:
Tirada ukumaha waa inay ahaataa mid si buuxda u hoos mari kara ukumaha. Haddii aad aragto in hal ama laba ukumood aysan awood u lahayn hoyga, waxay u fiicantahay inay soo qaadaan ilaa ay ka sii darayaan.
Ukumaha digaaga ee digaaga ah waa inay ku jiifsadaan lakabka.
Ha ku darin ukumaha buulooga inta lagu jiro geedi socodka. Xaqiiqdu waxay tahay in isla markiiba ka dib muuqaalka digaagga ugu horreeya, digaagga ayaa ka baxaya buulka, iyo ukumahani si fudud ayaa loo wareejin doonaa si aan micne lahayn.
Daryeelka shimbirta iyo buulkiisa markaad ukeenayso
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad daryeesho markaad gogol digaaga digaaga ku quudineyso. Qeybaha qaarkood waxay noqon karaan kuwo aad u jilicsan oo ay diidi doonaan inay ka tagaan buulka dabiiciga ah inta lagu jiro mudada wareegista. Sidaa darteed, waa in si gaar ah loo soo koobay si ay u cunaan, ama Ku rid cuntada iyo biyaha horteeda buulka shimbiraha.
Si kastaba ha noqotee, biyo aad u baahan tahay inaad si gaar ah u taxadarto oo hubso in shimbiraha aysan ku dhicin markabka iyada oo aan daadin buulkoodii. Inkasta oo ay muhiim u tahay biyaha wabiga ah ee u dhow buulkaba si ay u xirtaan weel biyo ah oo ay ku daali karaan wax yar.
Feeding sidoo kale waxay leedahay shuruudaha gaarka ah u gaar ah: waa in aanay noqon qoyan, sababtoo ah foomkan wuxuu sababi karaa xanuunada mindhicirka ee hen.
2-3da maalmood ee ugu horreeya shimbirta marnaba kama soo baxaan ukumaha, sidaas darteed waa in laga saaraa buulkaba oo la keenaa xayawaanka cunto iyo cabitaan. Mararka qaarkood, ka dib quudinta, digaagga ayaa sii socon kara socodka, sidaas darteed waxay u baahan tahay in dib loo soo celiyo oo ku fadhiisto ukunta.
Mustaqbalka, waxaa loo arkaa mid caadi ah haddii shimbir ka kacdo buulkeedii 2-8 jeer si uu u cuno, halka ay ukunteeda u baxdo kaliya 10-15 daqiiqo.
Inkastoo aysan jirin digaag beerta, waxaad baadhi kartaa ukunta iyo buulkaba, hagaajinta qashinka, ku beddel qalab qallalan (haddii aad u baahan tahay mid).
Aad u badan waxaa muhiim ah in la hubiyo ukumaha wakhtigeedasi ay u go'aamiyaan haddii aysan jirin mid aan dhexdhexaadin kuwaas oo noqon doona iftiin. Haddii la bacrimiyay, ka dibna horeyba xilligaas waxa aad ku arki doontaa embriyaha dhexdiisa gudaha qaabka mugdiga iyo calaamadaha nidaamka wareegga mustaqbalka.
Sidoo kale, waxay dhacdaa in horumarinta embriyaha ay tahay hal sabab ama mid kale oo joojiya. Xaaladdan, gudaha ukunta, waxaad arki doontaa giraanta dhiigga ama hal gyrus.
Mar labaad, waxaa haboon in la baadho ukunta hoosteeda, digaagani waa maalinta 19aad, digaaga iyo turkiga - maalinta 26aad, iyo berriga - maalinta 27-28. Waxaa muhiim ah in laga saaro buulkisa ukunta kuwaas oo ay ku jiraan embriyo barafaysan oo lagu arki karo si fudud mugdi madow oo aan lahayn xididada dhiigga.
Qodob kale oo muhim ah oo ku saabsan daryeelka xayawaanka waa baaritaanka xaaladdeeda. In yar oo dhaqaaqa oo aan laheyn fursad joogto ah si aad u qaadato barkada qubeyska, iyo sidoo kale qubeyska qoryaha, digaagga ayaa heli kara dulin badan. Haddii ay suurtagal tahay, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado oo joojiyo faafiddooda.
Qaababka muuqaalka dhalinyarada
Sida aan hore u soo sheegnay, digaagga ayaa bilaabaya in ay ka dhigaan iyagoo maraya adduunka horeba 19-21 maalmood. Waxay ka dillaacaan ukunta, way qoyan yihiin, laakiin ka dib marka ay fadhiyaan digaagaga dhowr saacadood way qalalan yihiin.
Laakiin horey u qalalan, waxaa lagula talinayaa in ay ka qaadaan lakabka muddo ka dibna ku rid sanduuqa leh jilicsan, dhar hore u daboolan, hoose. Isla mar ahaantaana, waa in lagu hayaa heerkulka caadiga ah laga bilaabo 26 ilaa 28ºS.
Qiyaas noocan oo kale ah ayaa loo qaadaa si loo hubiyo in digaaga uu ku fadhiistay ukumaha haray. Ka dib oo dhan, hen wuxuu leeyahay muuqaal noocan oo kale - inuu ka tago buulka ugu dhakhsaha badan ka dib dhalashada ee chicks dhowr ah. Waxaa suurtogal ah in dhammaan digaagga ay ka hoos maraan hen ka dib marka dhirta ka soo baxdo ukunta ugu dambeysa ee ku hoos jirta.
Muuqaal muhiim ah taas oo mid ka mid ah hen waa inaad fadhiisan kartaa iyo digaagga kale, gaar ahaan, waxa lagu qabtey naqshad.
Haddii aad u ogolaato iyaga inay u dhow u guurtaan oo ay la socdaan dhallinyaradeeda, oo samee fiidkii dambe ee xilliga quudinta, waxba ma fahmi doonto. Si kastaba ha noqotee, xad dhaafka ah ee digaagga ma aha mid u qalma, tan iyo digaag ayaa ah kuwa ugu awoodda badan in ay wadaan 25 qof.
Daryeelka digaagga digaagga ah iyo dhallintooda, arrimaha soo socda waa muhiim:
Digaagga waa in si wanaagsan loo quudiyo, maaha inaad ku tiirsanaato cunto badan, laakiin qiimaha nafaqada ee shimbirta. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in lagu daro hadhuudhka iyo cagaarka ee raashinka.
Quudinta digaagga waxay ka bilaabataa ukun la jarjaray, taas oo caanaha caanaha-caanaha, siriyaalka la karkariyey si tartiib tartiib ah loo bixiyay, ka dib taas oo horeba u suurtogashay in lagu beddelo masago.
Aad ayey muhiim u tahay labada diga iyo kuwa yarba inay cabbaan biyo badan oo nadiif ah oo cusub, taas oo ah mudnaanta koowaad. Tixgeli in qof weyn oo lo'da ah iyo digaagga yaryar ay u baahan doonaan cabitaano kala duwan.
Waxaa muhiim ah in si joogta ah loo sii daayo dhallinyaradu lugaha, laakiin waxaa qasab ah in ay noqoto meel ka mid ah qalinka halkaasoo hen ay ku dhuuman karaan dhallinyarada cimilada. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin lagu ilaalinayo shimbiraha ka soo baxa.